လူခါး ...'s Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Maleyangon,yangonMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (10)Discussions (145)EventsGroups (5) လူခါး ...'s Likes လူခါး ...'s Friends
View All လူခါး ...'s Groups
SIG - SEO (Search Engine…
လူခါး ...'s Discussions
Auto CAD နဲ့ Freelance လုပျခငျြသူမြားအတှကျ
Started Jan 13, 2011 Format ချလို့ မရလို့ပါ ...
Started Apr 27, 2010 ရက်ရက်စက်စက်သိချင်လို့ပါ ...
Started this discussion. Last reply by လူခါး ... Dec 8, 2009. View All
လူခါး ... has not received any gifts yet
လူခါး ...'s Page
လူခါး ... postedablog postHow to Install Joomla Websiteအရင်တစ်ခေါက်က XAMPP ကို Install လုပ်တာကို ရှင်းပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီpost ကိုမဖတ် ရသေးဘူး ဆိုရင် How to install Xampp XAMPP Install လုပ်တာကိုအရင်သွား ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Joomla website တစ်ခုကို Installation လုပ်တာကို သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joomla website ပုံစံကို လေ့လာဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Singapore Web Design ဝဘ်ဆိုက်ကို သွားပြီး စာမျက်နှာနဲ့…See MoreDec 31, 2013 0
mgyaykhae liked လူခါး ...'s blog post SEO သင်ခန်းစာ - website title tag optimizationNov 6, 2013zawzaw liked လူခါး ...'s blog post jQuery .slideToggle() tutorialsOct 6, 2013zawzaw liked လူခါး ...'s blog post jQuery if else သင်ခန်းစာOct 6, 2013လူခါး ... and Aung Aung are now friendsSep 9, 2013လူခါး ... posted blog postsWhat is jQuery?jQuery အခြေခံ သင်ခန်းစာ ၀၁jQuery သင်ခန်းစာ ၀၂2 more…Apr 13, 2013လူခါး ... and aungkooo are now friendsMar 10, 2013လူခါး ... postedablog postHow to Install Joomla Websiteအရင်တစ်ခေါက်က XAMPP ကို Install လုပ်တာကို ရှင်းပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီpost ကိုမဖတ် ရသေးဘူး ဆိုရင် How to install Xampp XAMPP Install လုပ်တာကိုအရင်သွား ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Joomla website တစ်ခုကို Installation လုပ်တာကို သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joomla website ပုံစံကို လေ့လာဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Singapore Web Design ဝဘ်ဆိုက်ကို သွားပြီး စာမျက်နှာနဲ့…See MoreMar 9, 2013 0
လူခါး ... postedablog postSEO သင်ခန်းစာ - website title tag optimizationမင်္ဂလာပါ.. ဒီနေ့ကတော့ SEO ရဲ့ (အတိအကျ ပြောရရင်တော့ on page seo ရဲ့) အရေးကြီးဆုံး အသက်ဖြစ်တဲ့၊ title tag အကြောင်းကို ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နမူနာ website တစ်ခုနဲ့သင်ပေးပါမယ်။နမူနာ website ကိုတော့ Singapore SEO Services website နဲ့ ထားလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံး keyword research လုပ်ပါမယ်။ site ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က Singapore မှာ SEO ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးဖို့ပါ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးသင့်တဲ့ အဓိက keywords တွေက …See MoreMar 6, 2013 0
လူခါး ... postedablog postSEO သင်ခန်းစာ - website title tag optimizationမင်္ဂလာပါ.. ဒီနေ့ကတော့ SEO ရဲ့ (အတိအကျ ပြောရရင်တော့ on page seo ရဲ့) အရေးကြီးဆုံး အသက်ဖြစ်တဲ့၊ title tag အကြောင်းကို ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နမူနာ website တစ်ခုနဲ့သင်ပေးပါမယ်။နမူနာ website ကိုတော့ Singapore SEO Services website နဲ့ ထားလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံး keyword research လုပ်ပါမယ်။ site ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က Singapore မှာ SEO ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးဖို့ပါ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးသင့်တဲ့ အဓိက keywords တွေက …See MoreMar 2, 2013 0
လူခါး ... commented on chonwe7's group Web Design Learning"Guys, check out this link
Website ရေးနည်း myanmar tutorials (level: beginner, intermidiate)"Jan 24, 2013လူခါး ... joined chonwe7's groupWeb Design LearningU want to learn web design course, read this books.See MoreJan 24, 2013 3
လူခါး ... addedadiscussion to the group SIG - SEO (Search Engine Optimization)SEO tutorials | Learn SEO in Myanmar languageSEO အကြောင်းကို လေ့လာချင်သူများအတွက်၊ အင်္ဂလိပ်စာ အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် သင်ခန်းစာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာအခက်အခဲမရှိတဲ့သူများလည်း ဘယ်သူမဆို မြန်မာလိုဖတ်ရတယ်ဆိုရင် အတတ်မြန်တာပေါ့။ SEO အကြောင်းကို အခြေခံမှစပြီးတော့ အဆင့်မြင့်ပိုင်းအထိ နဲ့ SEO နည်းဗျူဟာများအထိပါ ရေးသား သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ လင့်ခ်တွေမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။LINKS: SEO beginner introduction | learn…See MoreJan 23, 2013 0
Nay Soe liked လူခါး ...'s blog post Website ရေးနည်း tutorial (level: beginner, intermidiate)Jan 23, 2013လူခါး ... commented on Phyo Wai Kyaw's group SIG - SEO (Search Engine Optimization)"To learn SEO in myanmar language. Please visit
SEO myanmar tutorials"Jan 11, 2013လူခါး ... joined Phyo Wai Kyaw's groupSIG - SEO (Search Engine Optimization)Friends, let's share SEO - Search Engine Optimization related stuffs.Jan 11, 2013 1
Chit Min Thu liked လူခါး ...'s blog post Website ရေးနည်း tutorial (level: beginner, intermidiate)Jan 5, 2013Kiddo Monstar commented on လူခါး ...'s blog post Website ရေးနည်း tutorial (level: beginner, intermidiate)"Our Services : www.myanmarwebdesigner.com Was Error >.<
About : Host Error How Can We Solve ???
Reason : Me Too , Host Was Ban >.<"Jan 4, 2013လူခါး ... postedablog postWebsite ရေးနည်း tutorial (level: beginner, intermidiate)Beginner ပါ ပါတဲ့အတွက် ဘယ်သူမဆို လိုက်လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်၊ တစ်ခုပဲ အခက်အခဲရှိမှာပါ၊ video tutorial (မြန်မာလို) တွေဖြစ်လို့ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရမှာ နည်းနည်းကြာပါမယ်၊ လိုက်လုပ်နိုင်ရင်တော့ web designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လမ်းစရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Free Myanmar Website Creation Tutorial မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။See MoreJan 2, 2013 1
လူခါး ... updated their profileDec 27, 2012 More... RSS
လူခါး ...'s Blog
jQuery if else သင်ခန်းစာ
Posted on April 2, 2013 at 10:14am0Comments
jQuery useful if else tutorial - jQuery မှာ if else အသုံးပြုပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်အောင် အလွယ်ဆုံး ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ basic level ဖြစ်လို့ လူတိုင်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ဖတ်ရန်: jQuery if else tutorial jQuery .slideToggle() tutorials
Posted on April 1, 2013 at 11:35am0Comments
jQuery သင်ခန်းစာ ၀၂ - jQuery နဲ့ box တစ်ခုကို slide လုပ်ပုံကို အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာ ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့် website မှာ တစ်ကယ်သုံးလို့ရမယ့် လက်တွေ့ သင်ခန်းစာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ဖတ်ရန်: jQuery slideToggle Tutorial
Posted on April 1, 2013 at 11:04am0Comments
Posted on March 29, 2013 at 5:06pm0Comments
jQuery ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးသင်ခန်းစာကို ဘာမှမသိသေးတဲ့လူတောင် လိုက်နိုင်အောင် သေသေချာချာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။ တစ်ကယ်လို သင်ဟာ jQuery ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားပြီး jQuery ရေးတတ်ချင်ရင်တော့ အခုသင်ခန်းစာက အစပါပဲ။ အခုကတည်းက လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ဖတ်ရန်: jQuery basic tutorials What is jQuery?
Posted on March 29, 2013 at 1:00am0Comments
Website တွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ jQuery အကြောင်းကို အသေးစိတ် လူတိုင်းနားလည်အောင် level အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဝင်လေ့လာကြည့်ပါဦး။
သင်ခန်းစာဖတ်ရန်: … Continue AddaBlog Post
At 11:42am on December 18, 2010, tuntunaung.aung said… နည်းနည်းလောက်မေးကြည့်ချင်လို့ပါ.......သိတဲ့သူများလည်းအမြန်ဆုံးဖြေပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာ
ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေ Devmgmt.msc ကိုခေါ်လိုက်ရင်...Device manager ရယ် file , Action.view,help ,အဲဒီတက်ဘားလေး၃ခုပဲပေါ်တယ်...အောက်မှာ computer , mouse, disk drives,
dvd rom drives, montions,network adapter,processor,ကျန်တာတွေ့လည်းရှိသေးတယ်လေအဲဒါတွေအားလုံးကတစ်ခုမှမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ.......နီရိုကိုအင်စတော့လုပ်လိုက်တာအဲဒီလိုတွေဖြစ်ပြီး...Song ပါပျောက်သွားတယ်...ADD or Remove program တည်းမှာလည်းအင်တာလုပ်ထားတဲ့ဆော့ဝဲတွေက...တစ်ဝက်ပဲပေါ်တယ်...ကျန်တစ်ဝက်ကအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ကူညီကြပါဦးဘယ်လို့လုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး......... At 2:06pm on December 16, 2009, manawphyulay said… No comments yet!
North updated their profile photo46 minutes agoNorth updated their profile46 minutes agozayjoe commented on Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ)'s blog post wordpress အကြောင်းသိကောင်းစရာများ 1ThursdayYe Minn Soe replied to JimSamMee's discussion ITPEC EXAM အကြောင်းThursdayzayjoe joined leojack's groupWeb DeveloperMar528
WINEYUAUNG postedadiscussionMPT Outlook POP3 & SMTP ErrorMar30
Min Thu Aung joined linnyown's groupCCNA (Security)Feb 25 1
Min Thu Aung joined linnyown's groupCCNA (Voice)Feb 25 0
Mr. AungSLy updated their profileFeb 25Mr. AungSLy updated their profile photoFeb 25Thura Aung joined မင်းမင်းဇော်'s groupအိုင်တီလူမျိုးများ(သို့ )None Access DeniedFeb 25 2
Joe postedadiscussionNetwork monitoring toolsFeb 18 0